IQ Option တစ်ဦးက legit ပွဲစားတစ်ခုသို့မဟုတ်အန္တရာယ်လိမ်လည်မှု: 2019 ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်?
IQ Option သုံးသပ်ချက်
ကျွန်မအမြင်ကတ ော့ တ ော်တ ော်ကြာကြာအချိန်အတွင်း ဒီဟာက အက ောင်းဆုံး အကျိုးဆ ောင်ပဲ။ ဖြစ်သင့်တဲ့ ရှ ေ့ပြ ေး ဒွိစုံရွ ေးချယ်ကုန်သွယ်နိုင်မှု စင်္ကြံပုံစံကို တွ ေ့သွားပြီ လို့ ကျွန်မ ထင်တယ်။ အလွန်က ောင်းမွန်တဲ့ ဆ ော့ဖ်ဝဲပဲ။
ခင်ဗျားတို့လည်း IQ Option သုံးရတာ ကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့ ကျွန်မထင်ပါတယ်။
IQ Option စမ်းသပ်အက ောင့်
IQ Option ဗန်းပြ ရိုက်စားလား?
IQ Option ငွေထုတ်ပ ေးခြင်း
IQ Option ပေးချေမှု
IQ Option Software များ
IQ Option ပြန်
အသေးစိတ်ဇယား, Tools များနှင့်အညွှန်းကိန်း
IQ Option အပျငှေ
သက်တမ်းကုန်ဆုံး Times သတင်းစာ 1 တစ်လမှ 1 မိနစ်စတင်
IQ Option ဆုတ်ခွာ
ဒေါင်းလုပ် IQ Option စမတ်ဖုန်း App ကို
သငျသညျဖွင့်လှစ်သင့်ပါတယ် IQ Option အကောင့်?
ဘာဖြစ်တာလဲ IQ Option ထင်ရှားသည်?
ဘာတွေလဲ IQ Option အားနည်းချက်တွေ?
သင်နှင့်အတူအကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်သင့်ပါတယ် IQ Option?
အကြောင်းကိုကုန်သည်တိုင်ကြားမှုများ IQ Option
Forex options များ
Is IQ Option စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်?
ဘယ်မှာလဲ IQ Option based?
အားဖြင့်အများဆုံးကုန်သွယ်အရွယ်အစားကဘာလဲ IQ option?
ဘယ်လိုစိတ်ချ IQ Option?
မ IQ Option အသုံးပြုမှု MetaTrader?
အတွက်ငွေသွင်းဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများ IQ Option အကောင့်?
ကနေငွေသားထုတ်ယူဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများ IQ Option?
မ IQ option ဈေးကွက်ထဲမှာအကောင်းတစ်ဦးဂုဏ်သတင်းကိုရသလော
၏ဆုပေးပွဲ IQ option:
အတူအကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်နည်းလမ်းများ IQ Option?
ဘယ်လိုသုံးစွဲဖို့ IQ Option USA တွင်
၌သင်တို့၏ငွေကြေးသိုက်ပိုက်ဆံပြောင်းပေးဖို့ကိုဘယ်လို IQ Option?
24-1-2019 ကို update: VIP ဆိုတာဘာလဲ IQ Option?
အစစ်အမှန်အကောင့်ရဖို့ကဘယ်လို IQ Option?
ဘယ်မှာလဲ IQ Option ခွင့်ပြု?
အဘယ်ကြောင့်မ IQ Option ငါ့ကိုငွေသွင်းပါစေ?
CFD အတွက်ကဘာလဲ IQ Option?
အတွက် Forex ကုန်သွယ်မှုလုပ်နည်း IQ Option?
Bitcoin အပေါ်ဝယ်ရောင်းဖို့ကိုဘယ်လို IQ Option?
ဘာဖြစ်သလဲ IQ Option ဒစ်ဂျစ်တယ်?
ဘယ် eWallet များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ် IQ Option?
ဘာဖြစ်သလဲ IQ Option ပွဲစား app ကို?
ဘာဖြစ်သလဲ IQ Option မြှောက်ကိန်း?
အတွက် crypto ကဘာလဲ IQ Option?
IQ Option လိုလားတဲ့ရဲ့
ငါသည်ဤဖြစ်ကောင်းကျွန်မကြာမြင့်စွာသောကာလ၌မြင်ရပါတယ်သောအကောင်းဆုံးအကျိုးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။ ငါသူတို့ဘာတစ်ဦးကိုကိုယ်စားပြုထင် binary options များကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်း ယခုသို့မဟုတ်အနာဂတ်အတွက်ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ဒါကစျေးကွက်များတွင်အချို့အရောင်းအစေလိုသောလက်တွေ့ကျကျတိုင်းကုန်သည်များအတွက်ကု သ. မရသောကြောင့်ပဲကြောက်မက်ဘွယ်အားလုံးပတ်ပတ်လည် software ဖြစ်ပါသည်။ ငါသည်သင်တို့ကိုယောက်ျားတွေသုံးပြီးကိုချစ်သွားကြသည်ထင် IQ Option.
အဲ့အကြ ောင်း သွားကြတာပေါ့။ ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ IQ Option ဟာ ဥရောပမှာ ” CySEC” ကစိစစ်အတည်ပြုပေးထားပြီး EEA မှလည်း လုပ်ပိုင်ခွင့် ပေးထားပါတယ်။ အဲ့တော့ စည်းကမ်းနဲ့ ချုပ်ကိုင်ထားတဲ့ အကျိုးဆ ောင်ဆိုတ ော့ က ောင်းမွန်တဲ့အချက်ပ ေါ့။ မက ောင်းတဲ့အချက်ကတ ော့ သူတို့ဟာ အမေရိကန်၊ ကနေဒါ၊ ဩစတြေးလျ၊ အစ္စရေး၊ ဆီးရီးယား၊ ဆူဒန်၊ ဂျပန်၊ မြောက်ကိုရီးယား၊ ဘယ်လဂျီယန်၊ ပါလက်စတိုင်းနဲ့ အီရန် နိုင်ငံတွေက ကုန်သွယ်သူတွေကို လက်မခံတာပဲ။
ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကသို့အရပါလိမ့်မယ်။ အစဦးတွင် "IQ Option ဥရောပ, Ltd ဆိုက်ပရပ်စ်မှာမှတ်ပုံတင် CySEC "" အားဖြင့်ဥရောပတိုက်တွင်မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုဖြစ်ပါတယ် "နှင့်လည်း Authorized နှင့်ဓနသဟာယဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယမှာ IQ option "IQOPTION, LTD" ဟုအဆိုပါအမည်အောက်တွင်ဥရောပပြင်ပတွင်လုပ်ကိုင်မနှင့် St. ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနီဒိုင်း (စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်မပါ) မှာမှတ်ပုံတင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်အားလုံးအားလုံးနှင့်အတူကကြီးမားတဲ့အပေါင်းဖြစ်သောရေတွင်းတစ်တွင်း-စညျးမဉျြးစညျးကမျးပွဲစား, ပါပဲ။ အဓိက con သူတို့ကအမေရိကန်, ကနေဒါ, သြစတြေးလျ, အစ္စရေး, ဆီးရီးယား, ဆူဒန်, ဂျပန်, N ကကိုရီးယား, ဘယ်လ်ဂျီယံ, ပါလက်စတိုင်းနှင့်အီရန်ထံမှကုန်သည်များကိုလက်ခံမည်မဟုတ်ကြောင်းသျောဖြစ်ခြင်း။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအများဆုံးပြန်မှန်ကန်သောခန့်မှန်း (အောင်မြင်သောကုန်သွယ်မှု) ၏အမှု၌% 92 အထိရှိပါတယ်။ နှင့်တနင်္ဂနွေပေါ်တွင် max ကိုပြန်အောင်မြင်သောကုန်သွယ်မှုများအတွက်% 95 အထိရှိပါတယ်။ သင်တနင်္ဂနွေကိုကျော်အနည်းငယ်ရွေးချယ်စရာလုပ်ဖို့ကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်ဒီတော့သင်ကမှန်ကန်တဲ့ခန့်မှန်း (အောင်မြင်သောကုန်သွယ်မှု) ၏အမှု၌ရှိ% ပြန် 95 မှတက်ရတာပေါ့။ သို့သော်တနင်္ဂနွေနေစဉ်အတွင်းသူတို့သာ cryptocurrencies ကိုဆက်ကပ်။ အသစ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရွေးချယ်စရာ 900% အထိတက်သွားနိုင်သည်ကိုပိုမိုမြင့်မားဆုကြေးငွေကိုဆက်ကပ်။
ဒါ့အပြင်တစ်ဦးကကောင်းတဲ့အပိုပုဖြစ်ပါသည် IQ Option သငျသညျအနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်အတူပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်ပြိုင်ပွဲ။ နှင့်ပြိုင်ပွဲဆုရရှိသူအလွန်အကျိုးအမြတ်စျေးနှုန်းများကိုရရှိနိုင်သည်။
အပ်ဒိတ်: 22-1-2019: IQ Option ပြိုင်ပွဲ ပြိုင်ပွဲဥရောပပြင်ပတွင်အသုံးပြုသူများအတွက်သာရရှိနိုင်ပါသည်။
အားလုံးညာဘက်, ဆော့ဖ်ဝဲပလက်ဖောင်းများအတွက်ဒါငါ့အ rating, ငါသည် 10 ထဲကသူတို့ကို 10 ပေးလိမ့်မယ်။ ငါကငါရှည်ရှည်သောကာလ၌တွေ့ခဲ့ဖူးသမျှအကောင်းဆုံးလို့ထင်ပါတယ်။ မြေတပြင်လုံးကို interface သည်အသုံးဝင်မှုရှိစေရန်, အဆင်အပြင်နှင့်ပတ်သက်ပြီးရုံဤမျှလောက်များစွာသောကြီးသောအမှုတို့ကိုရှိပါသည်။ ဒါဟာထပ်မံဤသုံးသပ်ချက်ကိုသို့အသေးစိတ်ဆွေးနွေးကြမည်သည့်အချို့သောကြီးမြတ် features တွေရထားပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်။
ငါကပြန်ဘို့5ထဲက5ပေးထားပါတယ်။ အောင်မြင်သောကုန်သွယ်မှုများအတွက် 92% အထိ, ထို binary options များအဘို့အလွန်မြင့်မားပြန်ပါတယ်။ သို့သော်ရှိသမျှသောမယ့်, သစ်ကိုဒစ်ဂျစ်တယ်ရွေးချယ်စရာ feature သင်သည်အရောင်းအအနိုင်ရတဲ့အပေါ် * 900% အမြတ်သကဲ့သို့မြင့်မားစေရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ငါပြန်လည်သုံးသပ်အတွက်နောက်ပိုင်းမှာဒစ်ဂျစ်တယ် options များအကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ်။ * သင်တန်း၏, သင်ထောက်အပေါ်ရရှိနိုငျသင်သည်အဘယ်သို့ကိုလည်းကျဘက်ကိုအပေါ်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်
သင်သည်သင်၏ကုန်သွယ်လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီရန်4ကွဲပြားခြားနားသောဇယားလိုင်းပါဝင်သည်ကြောင်းအမျိုးအစားများ, အရက်ဆိုင်, ဖယောင်းတိုင်နှင့် Heikin Ashi အကြားရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
သငျသညျနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်လမ်းကြောင်းသစ်အောက်ပါသို့ရောက်နေလျှင်, သင်စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်အထောက်အပံ့နှင့်ခုခံရေးအဆင့်ဆင့်ထူထောင်နိုင်ရန်အလားအလာလိုင်းကဲ့သို့ကွဲပြားခြားနားပုံဆွဲ tools တွေအကြားရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
ဒါကအားလုံးမဟုတ်ပါ; IQ Option သင်တို့ကိုလည်းသင်နှစ်သက်တဲ့ကုန်သွယ်စတိုင်အပေါ်အခြေခံပြီးနေရာလေးကိုအတွက်လာလတံ့သောကွဲပြားခြားနားသောညွှန်းကိန်းများစွာနှင့်အတူပေးပါသည်။
ဤသူအပေါင်းတို့သည်အင်္ဂါရပ်တွေကိုသင့်ကုန်သွယ် interface ကိုကျန်ကြွင်းအောက်ခြေမှာအလွယ်တကူဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုငါ4ထဲက5ပေးထားပါတယ်။ ကျွန်မပထမဦးဆုံးပွဲစားပူးပေါင်းအကြောင်းကိုမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါသူတို့ကအခြေခံအားဖြင့်ဖြောင့်ကွယ်ပျောက်ငါ့ကိုပြန်ကြားခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ပျမ်းမျှအားတွင်, သင်ထောက်ခံမှုအဖွဲ့သည်အလွန်ကောင်းသောဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သောတစ်မိနစ်အောက်မှာ၌သင်တို့၏တောင်းဆိုမှုများကိုတုံ့ပြန်ရန်မျှော်လင့်ထားသင့်ပါတယ်။
သငျသညျဒက်ဘစ် / ခရက်ဒစ်ကဒ်နဲ့ထိုကဲ့သို့သော Skrill အဖြစ် eWallets ပါဝင်သည်အများအပြားသိုက်နည်းလမ်းများအကြားရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ဖောက်သည်ဝယ်လိုအားကြောင့်, IQ Option မကြာသေးမီကလက်ခံခဲ့သည်ငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်များအဖြစ် ADV ငွေကြေးနှင့် AstroPay ကဒ်မိတ်ဆက်ပေးသည်။ ဒါဟာနောက်ထပ်လွယ်ကူအသစ်ကကုန်သည်များပလက်ဖောင်း join ဖို့စေသည်။
သင်သည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးသင်၏အကုန်သွယ်အနေအထားကိုင်ထားချင်ပါ့မလား 1 မိနစ်? 1 လ? ကောင်းပြီ, IQ Option အဓိကအားဖြင့်သင်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်မူတည်ထားတဲ့အများအပြားကုန်သွယ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးကာလပေးထားပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့်, binary options များရာထူး 1 တစ်မိနစ်သို့မဟုတ်5မိနစ်ကျင်းပနိုင်ပါသည်။ နောက်ထပ်အေးမြ feature ကိုသင်အမှန်တကယ်လာမည့်3မိနစ်ဥပမာအနာဂတ်၌ပေါ်ပေါက်ဖို့ကုန်သွယ်မှု entry ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီ 2013 ခုနှစ်မှာတည်ထောင်ခဲ့ပြီးကြောင့် CySEC ဥရောပ၌စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်မယ့်, စ Authorized နှင့်ဓနသဟာယဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်နှင့်ဓနသဟာယစည်းမျဉ်းများကြောင့်, IQ Option သာဥရောပလက်လီကုန်သည်များ၎င်းတို့၏ဘဏ္ဍာရေးတူရိယာတစ်ခုကိုရွေးပါစုဆောင်းခြင်းပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။
ဤသည်ပွဲစား၏လက်အောက်ခံဖြစ်ပါတယ် IQ Option ဥရောပ Limited နှင့် Agiou ဆိုက်ပရပ်စ်အတွက် Yiannis Nicolaides Center က၎င်းတို့၏ဌာနချုပ်ရှိတယ်။ သူတို့ရဲ့ CySEC လိုင်စင်နံပါတ် 327751 / 247 နေစဉ်ဒါကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း '' ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်နံပါတ် HE14 ဖြစ်ပါတယ်။
IQ Option ဥရောပ, အာရှ, လက်တင်အမေရိက, အာဖရိကနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံအများစု၏နိုင်ငံသားတွေကသူတို့ရဲ့န်ဆောင်မှုပေးထားပါတယ်။
သူတို့ကတစ်ဦးကိုနိုင်ငံတကာထောက်ခံမှုရှိသည်နှင့်ဒီအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများ 24 /7အဘို့ဖြစ်၏။ အဆိုပါထောက်ခံမှုအသင်းကိုဖုန်း, အီးမေးလ်, chat နဲ့ Skype ကိုအပါအဝင်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများမှတဆင့်ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။
ကျနော်တို့ကသူတို့ + 44 20 8068 0760 ဗြိတိန်နံပါတ်တစ်ခုကိုခေါ်နှင့်ကအလုပ်လုပ်တယ်နှင့်အမှန်တကယ်လူတစ်ဦးလိုင်းရဲ့အဆုံးမှာရှိပါတယ်အတည်ပြုခဲ့ပါ။
အားလုံးညာဘက်ဒါတွေအကြောင်းနည်းနည်းပိုပြီးပေါ်ရွေ့လျား IQ option သူတို့ရဲ့အကောင့်ရွေးချယ်စရာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌။ နိမ့်ဆုံးသိုက် $ 10 ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ရုံသူတို့ကိုတစ်ဦးပါပေးချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်အမှန်တကယ်အတော်လေးကောင်းပါတယ်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရငါသိုက်ထွက်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အသေးစားသိုက်ပမာဏကိုပဲစစ်ဆေးကြောင်းကြိုက်တယ်။ ပြီးတော့သင်ကပိုကြီးတဲ့ပမာဏကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမတိုင်မီအဖြစ်ကောင်းစွာလည်းအမှန်တကယ်ရုပ်သိမ်းသင့်ရဲ့ပိုက်ဆံ, လို့ရတယ်။
နိမ့်ဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏကိုကုန်သွယ်မှုနှုန်း $ 1 ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါအများဆုံး $ 20,000 ဖြစ်ပါတယ်။
$ 10, $ 5,000 ဦးရေအများဆုံးမှတက်သမျှသောလမ်းအတိုင်းနိမ့်ကနေသိုက်။ လည်း, သင့်သိုက်ရွေးချယ်စရာဘဏ်ကတ်များ, MasterCard, သို့မဟုတ် Visa e-ပိုက်ဆံအိတ်ဖြေရှင်းနည်းများ, ADV ငွေ, AstroPay နှင့် Skrill ဖြစ်ကြသည်။
သိုက်ကို process နှင့်သင့်ကုန်သွယ်အကောင့်ထဲမှာထင်ဟပ်ဖို့တိုတောင်းတဲ့အချိန်ယူပါ။ အများဆုံးဖြစ်ရပ်အတွက်လက်ငင်းဖြစ်လိမ့်မည်။
IQ Option 2016 အတွက်ချက်ချင်းထုတ်ယူမိတ်ဆက်ပေးသည်။ အဆိုပါအသားတင်ရလဒ်သည်သင်၏ဆုတ်ခွာတောင်းဆိုမှုကိုပိုမိုမြန်ဆန်လုပ်ငန်းများ၌ဖြစ်ပါတယ်နှင့်သင်ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သင့်ရဲ့ငွေရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထုတ်ယူသာသင်သိုက်များအတွက်အသုံးပြုသောအကောင့်ကိုဖန်ဆင်းနိုင်ပါသည်။
အောင်မြင်သောနှင့်အစာရှောင်ခြင်းထုတ်ယူဘို့, ဝိသေသလက္ခဏာသက်သေပြလိုအပ်သောဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်သင်ဆုတ်ခွာတောင်းဆိုချက်ကိုမချခင်တစ်ဦးအပြည့်အဝစစ်ဆေးအတည်ပြုအကောင့်ရှိသည်သေချာပါစေ။
ထရေးဒင်းပြောင်းရွှေ့ပေါ်တွင်သင်၏စမတ်ဖုန်းကို အသုံးပြု. စေသည်တစ်ချက်နေစဉ် IQ Option ထင်ရှားသည်။ သငျသညျအခမဲ့အဘို့မိမိတို့ကို iOS သို့မဟုတ် Android app ကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။
ဤအ apps များနှင့်ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုမှာလောက်ကြီးသောအမှုကိုသင်ဘရောက်ဇာကိုအခြေခံပြီးဒါမှမဟုတ် desktop app ကိုပေါ်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဖြစ်သူတို့နေဆဲအတူတူ features တွေပူဇော်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။
လက်ခံခဲ့သည်ကြသည်မဟုတ်သူနိုင်ငံတွေထဲကကုန်သည်များများအတွက်ဝမ်းနည်းပါတယ်။ သင်တို့မူကားများစွာသောအဘို့, ငါသည်ဤရှေးခယျြဖို့တစ်ခုဖြစ်သည်ထင်ပါတယ်။
IQ Option ၎င်း၏ပြိုင်ဖက်တို့တွင်အထွက်မတ်တပ်ရပ်နေတဲ့အကြီးအသဘောတူညီမှုပြုတော်မူပြီ။ သူတို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းအတော်လေးအသုံးပြုသူကိုသင်လွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူကတဆင့်သွားလာရန်ခွင့်ပြုဖော်ရွေသည်။ Accessibility ကိုလည်းပလက်ဖောင်း web browser ကိုဒါမှမဟုတ် desktop / မိုဘိုင်း app ကနေတဆင့်ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်တဲ့အဓိကအားသာချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ကုန်သည်စိတ်ကျေနပ်မှုကိုသေချာစေရန်တစ်ဦးလေလံခုနှစ်, IQ Option အကြီးအကျယ်ပညာရေးဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များကြွယ်ဝစုဆောင်းမှုအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။ 200 ပညာရေးဆိုင်ရာဗီဒီယိုများ, အစစ်အမှန်အချိန်မတ် News Feeds နဲ့ကုန်သည်တွေကနောက်ဆုံးစျေးကွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့် ပတ်သက်. အသိပေးစောင့်ရှောက်ကူညီပေးရန်အသေးစိတ်ဆောင်းပါးများကိုကျော်ရှိပါတယ်။
tradable ပိုင်ဆိုင်မှုများကို၎င်းတို့၏ရွေးချယ်ရေးလည်းအတော်လေးကျယ်ပြန့်သည်။ ဤရွေ့ကား binaries, ဒါပေမယ့်လည်း cryptocurrencies, ETFs, စတော့ရှယ်ယာနှင့်ကုန်စည်သာပါဝင်သည်။
IQ Option လည်းသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဒေသများအတွက်ကုန်သည်များအဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ထူးခြားသောဘဏ္ဍာရေးတူရိယာချုပ်ပေးမယ့်ကြီးမြတ်သဘောတူညီမှုပြုတော်မူပြီ။
ဥပမာအားဖြင့်, ဓနသဟာယလက်လီကုန်သည်များ platform ပေါ်တွင် binary options များရောင်းဝယ်ဖောက်လို့မရပါဘူး။ သို့သော်သူတို့ကဆဲ binary options များအဖြစ်အလားတူအမြင့်ဆုံးပြန်ပူဇော်ရသော Forex options များအတွက်ကုန်သည်နိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ကဒီပွဲစားအရောင်းအတိုတောင်းသောသက်တမ်းကျင်းပရန်ပိုနှစ်သက်သူကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအပေါ်အဓိကအားအာရုံစိုက်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးတိုတောင်းကာလကိုသတ်မှတ်မဟုတ်လျှင်အဆိုပါကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်းကုန်ဆုံးကြိမ်များသောအားဖြင့်တစ်နေ့တာအဆုံးမှာသက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်သည်။ သင်တစ်ဦးကုန်သွယ်မှုအနေအထားကိုင်ထားနိုင်ပါတယ်အရှည်ဆုံးဖြစ်သည့်တစ်လ option ကို၏အဆုံးသို့သျောလညျးရှိပါသည်။ ဒါဟာလပေါင်းများစွာမှတိုးချဲ့ကြောင်းရှည်လျားသောရာထူးကိုင်ချင်သူကိုကုန်သည်တွေအနေနဲ့ဆွဲဆောင်မှုမရှိရွေးချယ်မှုမှန်ကန်စေသည်။
သင်နှင့်အတူအကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ခြင်းရှိမရှိအံ့သြနေပါလျှင် IQ Option သို့မဟုတ်မ, ဒီမှာငါတို့သည်သင်တို့လက်ျာဆုံးဖြတ်ချက်ချကူညီပေးပါမည်ယုံကြည်သတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုပါပဲ။
အဆိုပါ IQ Option website ကိုကောင်းစွာထိုကဲ့သို့သောသင်သည်များစွာသောအကျိုးဆောင်ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဘယ်အရာကိုအဖြစ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစုပြုံပြွတ်သိပ်အများကြီးမပါဘဲဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
ဒါဟာသင်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ပြီးနောက်ရရှိမည်သောအရာကိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုသင် site ကိုနှိမ့်ချ scroll အဖြစ်ဖော်ပြထားသည်မတူညီသောအခန်းကဏ္ဍမှတဆင့်သွားလာရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်။
အဆိုပါက်ဘ်ဆိုက်တခုကိုသင်အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်နှင့်အတူလုံးဝနီးပါးမဆိုအရပ်မှသင့်အကောင့်ကို login ခွင့်ပြုကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်းကနေတဆင့်လက်လှမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ site ကိုက ပို. ပင်အလွယ်တကူကမ္ဘာ၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများတို့မှကုန်သည်များစေရာ 13 ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။
အကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်လွယ်ကူပါတယ်။ အဆိုပါသရုပ်ပြအကောင့်ကိုသင်လိုအပ်သမျှလက်လှမ်းမီရရှိရနျသငျ့အမည်များနှင့်အီးမေးလ်အကောင့်များကိုဖြစ်ပါသည်။ အစစ်အမှန်ငွေသားအကောင့် 10 နှင့် 30 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်အတွင်းအကြားကြာနိုင်ပါတယ်သင်မှတ်ပုံတင်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်စိစစ်အတည်ပြုမိတ္တူကူးပေးပို့လိုအပ်သည်။
IQ Option ကုန်သည်များအဘို့အအသုံးဝင်သောသင်ယူမှုအရင်းအမြစ်များကိုပေးပိုမိုင်သွားပြီ။ 200 ကျော်အရည်အသွေးမြင့်မားသောဗီဒီယိုများ site ပေါ်တွင်တည်ခင်းဧည်နေကြသည်။ ဤရွေ့ကားအစပြုလေ့ကျင့်ရေးကနေတိကျတဲ့ဘဏ္ဍာရေးတူရိယာကုန်သွယ်မှုဖို့ဘယ်လိုအထိ။
သင်စျေးကွက်နှင့် ပတ်သက်. အမှန်တကယ်အချိန်သတင်းအချက်အလက်များလိုအပ်သည့်အခါ Newsfeed ကိုနေရာလေးကိုလာနေချိန်တွင်သူတို့တစ်တွေအဆက်မပြတ် updated ဘလော့ဂ်ရှိသည်။ သငျသညျအဖြေကိုလေ့မေးခွန်းများကိုမေးသော်မှရနိုငျတဲ့အသေးစိတ်မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများအပိုင်းလည်းရှိပါတယ်။
သင့်အကောင့်သို့ငှလွယ်ကူသည်နှင့် IQ Option E-ပိုက်ဆံအိတ်, ခရက်ဒစ်ကဒ်နဲ့ဝါယာကြိုးလွှဲပြောင်းအပါအဝင်အများအပြားငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်များလက်ခံခဲ့သည်။
အတော်လေးမကြာသေးမီက, သူတို့လက်ခံငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်များဟာသူတို့ရဲ့ကြီးထွားလာစာရင်းအကြား ADV ငွေကြေးနှင့် AstroPay ကဒ်ကဆက်ပြောသည်။ ကအသိအမှတ်ပြုခံရဖို့သင့်ရဲ့ကုန်သွယ်အကောင့်ယူပါလိမ့်မယ်အချိန်ပမာဏကိုသင်ရွေးချယ်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုအပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျငွေသွင်းနိုင်သည်နိမ့်ဆုံးပမာဏကို $ 10 ကျော်လွန်နိမ့်ဆုံးလိုအပ်သူကိုယှဉ်ပြိုင်ပွဲစားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အတော်လေးတရားမျှတတဲ့ဖြစ်သော $ 100 ဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျအရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေတူရိယာပေါ် မူတည်. သင်ကဲ့သို့နည်းနည်းအဖြစ် $ 1 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ပါတယ်။ ဝင်ငွေရရှိမှုဆုတ်ခွာလည်းလွယ်ကူသည်သင်ဖျောပွပေးချေမှုနည်းစနစ်များသုံးပြီးပို့ခံရဖို့သင်တို့ငွေကိုတောင်းဆိုနိုင်သည်။
သို့သော် IQ Option များသောအားဖြင့်ငှတဲ့အခါသင်အသုံးပြုတဲ့ငွေပေးချေမှု option ကိုမှထုတ်ယူပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။ Card ကိုထုတ်ယူလည်းဒါဒီကုန်သွယ်အကောင့်ဖွင့်ရှေ့တော်၌စိတ်တွင်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းရကျိုးနပ်သည်ပိုမိုမြင့်မားကိုဦးစားယူပါ။
အဆိုပါကုန်သွယ် interface ကိုကောင်းစွာဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ သငျသညျညာ interface ပေါ်မှာတစ်ခုတည်းကလစ်အတွက် features တွေအမျိုးမျိုးရယူနိုင်တော့မည်ပါလိမ့်မယ်။
ရိုးရှင်းစွာမျက်နှာပြင်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းမှာပေါ်လာမှာ "အပေါင်း" နိမိတ်လက္ခဏာပေါ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်တစ်ဦးပစ္စည်းရွေးချယ်ခြင်း
ထိပ်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်ဆိုင်မှု, ဝင်ငွေရရှိမှုပြက္ခဒိန်နှင့် Forex ပြက္ခဒိန်မှအမြန်ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသော Market ကခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ဒါကအခြေခံကျဆန်းစစ်ဘို့ကြီးစွာသော feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်
ကွဲပြားခြားနားသောဇယား, သော graphical ကိရိယာများနှင့်အညွှန်းကိန်း
ဇယားများနှင့်အညွှန်းကိန်း၏စကားပြောသော, IQ Option စဉ်ဆက်မပြတ်ကွဲပြားခြားနားသောကုန်သွယ်စတိုင်များကိုက်ညီဖို့သူတို့ကိုကို update ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ, ပလက်ဖောင်းမကြာသေးမီက Ichimoku တိမ်တိုက်, Belkhayate Timing, DPO နှင့် KDJ ညွှန်းကိန်းမိတ်ဆက်ပေးသည်။
Excellent ကဖောက်သည်ထောက်ခံမှုတစ်ဦးမဆိုလျောက်ပတ်သောအကျိုးဆောင်များအတွက်ရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။ IQ Option ဖုန်းကို, အီးမေးလ်, နှင့်မကြာသေးမီကသူတို့သည်သင်၏မေးခွန်းများကိုဖြေရှင်းဖို့အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်ရသောတိုက်ရိုက်ချက်တင်ကဆက်ပြောသည်ရှိသည်ဟုအပါအဝင်နည်းလမ်းများ၏နံပါတ်မှတစ်ဆင့်ထောက်ခံမှုပေးထားပါတယ်။
ဒါကြောင့်အဘယျသို့အရောင်းအပေါ်ထိရောက်တဲ့ပြန်ကော? IQ Option အောင်မြင်သောအရောင်းအပေါ်% ထိရောက်ပြန် 92 အထိပေးထားပါတယ်။ ဤသည်အများအပြားပွဲစားများသည်လက်ရှိတွင်ပူဇော်သောအရာကိုထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ အဆိုပါကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်းကုန်ဆုံးကြိမ် 60 နာရီမှ 1 စက္ကန့်ကနေစတင်မြန်နှုန်းကုန်သွယ် options များနှင့်အတူကာလတိုဖြစ်ကြသည်။ သင်တစ်ဦးကုန်သွယ်မှုကိုင်ထားနိုင်ပါတယ်အရှည်ဆုံး 1 တစ်လဖြစ်ပါတယ်။
ကုန်သည်တိုင်ကြားမှုများနှင့် ပတ်သက်. မှတ်ချက်များရှာဖွေခြင်း IQ Option အချို့တူးရန်လိုအပ်ပါသည်။ သို့သျောကြှနျုပျတို့ pissedconsumer.com အပေါ်အချို့သောအနှံ့သို့ရောက်ကြ၏။
အဆိုပါစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးမကြာသေးမီကသူတို့ "အမိန့်ဟာသူတို့ရဲ့ client များအတွက်အကောငျးဆုံးနညျးလမျးကွပ်မျက်ခြင်းမရှိ" များအတွက်အကျိုးဆောင်အပေါ်ချမှတ်ထားင်ဒဏ်ငွေရုပ်သိမ်းပေးရန်ကတည်းကဤသို့သောတိုင်ကြားမှုများ CySEC အရေးယူသတိပေးခံရကြပေလိမ့်မည်။
အများအပြားကုန်သည်များညည်းညူနောက်ထပ်အကြောင်းရင်းနှင့် ပတ်သက်. နေသည် IQ Option ထုတ်ယူ။ အများစုမှာ၎င်းတို့၏ပိုက်ဆံကသူတို့အကောင့်ရောက်ရှိဖို့ရှည်လျားလွန်းယူကဆိုသည်။ သို့သျောလညျး IQ Option အမှန်တကယ်ကသင့်အကောင့်ရောက်ရှိဖို့ဝါယာကြိုးလွှဲပြောင်းထုတ်ယူဘို့ 45 ရက်ပေါင်းအထိကြာနိုင်သည်ဟုဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါ site ကိုရုပ်သိမ်းရေးတောင်းဆိုမှုများ၏ 68% များသောအားဖြင့်ကြီးမြတ်သောအရာ 24 နာရီအတွင်းလုပ်ငန်းများ၌ဖြစ်ကြောင်းဆိုပါတယ်။
မှတ်စု: ဘရာဇီး, အာဂျင်တီးနား, တောင်အာဖရိက, ထိုင်း, ဖိလစ်ပိုင်, ဗီယက်နမ်, အင်ဒိုနီးရှား, မလေးရှား, အပေါငျးတို့ယူရိုစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နိုင်ငံများတွင်: အဆိုပါဝါယာကြိုးလွှဲပြောင်းအောက်ပါနိုင်ငံများအတွက်လက်ရှိအချိန်တွင်သာရရှိနိုင်ပါသည်။
အတော်များများကကုန်သည်များလည်းမှုကြောင့်၎င်းတို့၏အနိမ့် $ 10 နိမ့်ဆုံးသိုက်နှင့်အခြားအသုံးဝင်သော features တွေရန်ပလက်ဖောင်းချီးကျူးလိုက်သည်။ CySEC ပုဖျောပွဒဏ်ငွေနုတ်ထွက်ကတည်းကအပြင်, တိုင်ကြားမှုများကျွန်တော်ကောင်းတဲ့လက္ခဏာထည့်သွင်းစဉ်းစားထားတဲ့လျှော့ချခဲ့ကြဟန် IQ Option ညာဘက်အမှုအရာလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ဖော်ရွေပလက်ဖောင်းဒီဇိုင်းကိုကောင်းစွာကဏ္ဍများကိုထွက်ချထားမည်အသုံးပြုသူကြိုက်တယ်။ ဒါဟာအနည်းငယ် mouse ကိုကလစ်မှတဆင့်တိကျတဲ့အပိုင်းကိုရှာဖွေတော်တော်လွယ်ကူပါတယ်။
အကောင့် interface ကိုသငျသညျပွင့်လင်းမျိုးစုံပြတင်းပေါက်သုံးပြီးအများအပြားအရောင်းအများအထူးသဖြင့်လျှင်ရှုပ်ပွနေအောင်ဖြစ်လာလေ့ပါဘူးဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ပိုဆိုးမြင်ကြပါတယ်။
Accessibility နောက်ထပ်သင်နီးပါးဘယ်နေရာကနေမဆိုရောင်းဝယ်ဖောက်နိုင်အဓိပ္ပာယ်မိုဘိုင်းဖော်ရွေ interface ကိုတဆင့်မြှင့်တင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။
ဤသည်ကုန်သွယ်မှုမှသန်း 10 ကျော်ကွဲပြားခြားနားသောဘဏ္ဍာရေးပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကမ်းလှမ်းအနည်းငယ်ပွဲစားတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ဒီနေရာတွင်ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်မတူညီသောပိုင်ဆိုင်မှုတစ် rundown ပါပဲ။
IQ Option binary options များကမ်းလှမ်းခြင်းဖြင့်ထွက်တော့တာပဲ။ ဤရွေ့ကားအောင်မြင်သောအရောင်းအပေါ် (92% အထိ) သတ်မှတ်ထားတဲ့ပြန်လာဆက်ကပ်။ မရှိသြဇာရဲ့အနှငျ့သငျဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်အများဆုံးပမာဏကိုသင့်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပါပဲ။
အဆိုပါပွဲစားမကြာသေးမီကဒစ်ဂျစ်တယ်ရွေးချယ်စရာလို့ခေါ်တဲ့တော်လှန်ရေးသမားတူရိယာမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားရိုးရှင်းစွာကုန်သွယ်လုပ်ပိုမြန်ရွေးချယ်စရာကုန်သွယ်ထံမှ * အမှုနဲ့။
* သင်တန်း၏, သင်ထောက်အပေါ်ရရှိနိုငျသင်သည်အဘယ်သို့ကိုလည်းကျဘက်ကိုအပေါ်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်
ဒစ်ဂျစ်တယ် options များနှင့်အတူထရေးဒင်းအများအပြားအားသာချက်များကိုသငျသညျအောင်မြင်သောအရောင်းအပေါ်% ပြန် 900 မှတက်ပါစေနိုငျသောဖြစ်ခြင်း၏အဓိကတစျခုရှိပါတယျ။ အလားအလာရာခိုင်နှုန်းအမြတ်အစွန်းသည်သင်၏ရှေးခယျြသောသပိတ်စျေးနှုန်းအပေါ်မူတည်ပါသည်။
ဟုတ်ပါတယ်, သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးပြီထက်ပိုမဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။ ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, သင်အမှန်တကယ်ဆုံးရှုံးမှု minimize သို့မဟုတ်အမြတ်အစွန်းအတွက်သော့ခတ်စောစောကုန်သွယ်ရေး exit နိုင်ပါတယ်။ ကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်းကုန်ဆုံးကြိမ် 1minute နှင့်5မိနစ်မှာသတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ ဤရွေ့ကား FX options များရရှိနိုင်မဟုတျပါရှိရာမဟုတ်တဲ့စညျးမဉျြးစညျးကမျးနိုင်ငံများရှိကုန်သည်များများအတွက်အထူးသဖြင့်သင့်လျော်ဖြစ်ကြသည်။
ဒီပလက်ဖောင်းရွှေ, ရေနံနှင့်ငွေအများပါဝင်ကြောင်းအတော်ကြာကုန်စည်ပေးထားပါတယ်။ သငျသညျပိုရှည်ကာလအဘို့အနေအထားတွင်ကျန်ရှိသော Preferences လျှင်ဤအထွက်ကြိုးစားပါ။
ဤရွေ့ကားလမ်းကြောင်းပိုင်ဆိုင်မှု, ညွှန်းကိန်းများနှင့်ကုန်စည်၏အုပ်စုများနှင့်ကုန်သွယ်မှုအလားတူထိတ်ရန်။ သူတို့ရဲ့အဓိကအားသာချက်သူတို့သင်သည်သင်၏အစုစုမျိုးစုံမှခွင့်ပြုနှင့်သင်တစ်ခုတည်းရှယ်ယာအဖြစ်အနည်းငယ်သာဝယ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဤသည်ပွဲစားကိုသင်ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်သည့်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် 165 ကွဲပြားခြားနားသောစတော့ရှယ်ယာ CFDs ကျော်မှ access ကိုပေးသည်။
သင်ဤပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ကမ္ဘာ့အကျော်ကြားဆုံးငွေကြေးအားလုံးရောင်းဝယ်ဖောက်နှင့်သင်တစ်ဦးမဟုတ်သောဥရောပတိုင်းပြည်ကနေအရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေလျှင် X1000 မှတက်၏သြဇာကိုခံစားနိုင်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးဥရောပကုန်သည်ဆိုရင်ဒီပွဲစား X30 မှတက်၏ Forex သြဇာကမ်းလှမ်းသောကွောငျ့, စိုးရိမ်ပူပန်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။
FX Options ကို ဥရောပကုန်သည်များအတွက်ကိုက်ညီမယ့်အခြားဘဏ္ဍာရေးထုတ်ကုန်ဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားရိုးရှင်းစွာအဘို့မွှေးကြိုင်လှည့်ကွက်နှင့်အတူ Forex နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ် option ကိုပေါင်းစပ် - န့်အသတ်အမြတ်အစွန်းနှင့်ကန့်သတ်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်အလားအလာရှိပါတယ်။
သငျသညျဒစ်ဂျစ်တယ် options များနှင့်အတူမြင်ရပါတယ်အဖြစ်, သင်ဘဏ္ဍာရေးတူရိယာစျေးနှုန်းကိုရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်ထင်ရာမှာသပိတ်စျေးနှုန်းကို select ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ပလက်ဖောင်းကိုအလိုအလျောက် * သင့်ရဲ့မျှော်မှန်းအမြတ်အစွန်းအလားအလာတွက်ချက်ပါလိမ့်မယ်။
သို့သော် FX ရွေးချယ်စရာ 1 နာရီအစုတခုသက်တမ်းကုန်ဆုံးရှိသည်။ ဒါပေမယ့်အေးမြအရာသင်ဆဲအမြတ်အစွန်းအတွက်သော့ခတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှု minimize လုပ်ဖို့ရငျ့ကကျြရှေ့တော်၌ထိုကုန်သွယ်ရေး exit နိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ဤရွေ့ကား, ယနေ့အတွက်ကုန်သွယ်မှုမှအပူဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုတချို့ရှိနေပါတယ်။ IQ Option သငျသညျလူကြိုက်အများဆုံး cryptocurrencies ၏ 11 မှ access ကိုပေးသည်။ ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, ထိုပွဲစားထူးခြားတဲ့သြဇာ cryptocurrencies ပေးထားပါတယ်။
ဥပမာအား Bitcoin 100 သင် X100 တစ်သြဇာနှင့်အတူ BTC ကုန်သွယ်မှုခွင့်ပြု x ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အမြတ်အစွန်း (သို့မဟုတ်အရှုံး) အလားအလာတိုးပွားစေပါသည်။
ဒါဟာသြဇာ cryptocurrencies ယင်းနှင့်ဓနသဟာယအပြင်ဘက်ကုန်သည်များမှသာရရှိနိုင်ဖြစ်ကြောင်းသတိပြုရကျိုးနပ်ပါတယ်။
IQ Option လည်းကုန်သည်များကကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအညွှန်းကိန်း၏ 11 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းဤပလက်ဖောင်းတွင်ညွှန်းကိန်းအရောင်းအဝယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာ X150 မှတက်၏သြဇာကိုကမ်းလှမ်းပါတယ်။
IQ Option အများအားဖြင့်တိုတောင်းသောသက်တမ်းကုန်ဆုံးကာလအာရုံစိုက်။ သငျသညျအလွန်တိုတောင်းသောသက်တမ်းရာထူးကိုင်ချင်လျှင်, သင် 60 စက္ကန့်များ၏သက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်းနှင့် 120 စက္ကန့်ရှိသည်သောတာဘိုရွေးချယ်စရာမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။
တိုတောင်းသောသက်တမ်းရွေးချယ်စရာ 1 တစ်မိနစ်၏သက်တမ်းကုန်ဆုံး,5မိနစ်, အဲဒီနောက်5မိနစ်၏နှစ်တိုးရှိသည်။ သင်တစ်ဦးကုန်သွယ်မှုအနေအထားကိုင်ထားနိုင်ပါတယ်အရှည်ဆုံး 1 တစ်လဖြစ်ပါတယ်။
ဤသည်ပွဲစားတစ်ဦးအောင်မြင်သောကုန်သွယ်မှု 92% ရန်သင့်အားဖွင့်ရနိုင်ဘယ်မှာလျောက်ပတ်သောထိရောက်သောပြန်ပေးထားပါတယ်။
IQ Option ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းမီဖောက်သည်ထောက်ခံမှုပေးခွငျးနှငျ့ ပတျသကျ. မီနိုင်တဲ့။ သူတို့ရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုအသင်း Skype ကို, ဖုန်း, အီးမေးလ်နဲ့ chat အပါအဝင်နည်းအမျိုးမျိုးအတွက်ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။ သူတို့ကအစဖောက်သည်မေးမြန်းချက်တုံ့ပြန်ရန်အတော်လေးအမြန်ပါပဲ။
သင့်အကောင့်ကို interface အတွင်းထောက်ပံ့ပေးမယ့်ချက်တင်အင်္ဂါရပ်လည်းရှိပါတယ်။ ဒါဟာသင်သူချင်းကုန်သည်များနှင့်အတူ chat ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ သင်တစ်ဦးထက်ပိုသောအတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များကဖြေကြားနိုင်သည့်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်မေးခွန်းရှိလာတဲ့အခါဒါဟာနေရာလေးကိုအတွက်လာနိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့တကယ်ငွေသားအကောင့်သို့ငှက e-ပိုက်ဆံအိတ်, ဝါယာကြိုးလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်အပါအဝင်လက်ခံငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်များနှင့်အတူအတော်လေးလွယ်ကူသည်။
သင့်အကောင့်မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုခံရဖို့အတှကျကရက်သတ္တပတ်ယူနိုင်ကြောင်းအဖြစ်ထို့နောက်အောက်ပါအတိုင်းကြောင်းအတည်ပြုဖြစ်စဉ်ကိုနည်းနည်းပိုတိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ $ 10 ၏နိမ့်ဆုံးကိုလက်ခံသိုက်ပမာဏကိုအချို့သောပွဲစားကိုကျော် $ 250 ၏နိမ့်ဆုံးလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ပေးထားလည်းအတော်လေးမျှတသည်။
သင့်ရဲ့ဝင်ငွေရရှိမှုဆုတ်ခွာလည်းအတော်လေးလွယ်ကူသည်။ သို့သျောလညျး IQ Option ပုံမှန်အားဖြင့်သင်သည်သင့်အကောင့်သို့ပိုက်ဆံငွေသွင်းဖို့အသုံးပြုတဲ့ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကနေတဆင့်လုပ်ထုတ်ယူကိုလက်ခံပါလိမ့်မယ်။
IQ Option မဆိုနိမိတ်လက္ခဏာကိုတက်ဆုကြေးငွေပူဇော်မထားဘူး။ ဒါဟာ CySEC ဥရောပကလိုအပ်ချက်ပါပဲ။
IQ Option အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်အများကြီးအသုံးဝင် features တွေပူဇော်ဖို့ကြီးမားသောအပြင်းအထန်လုပ်ဆောင်စေတော်မူပြီ။ 200 ကွဲပြားခြားနားသောဗီဒီယိုလဲ tutorial ကျော်သူတို့ရဲ့စုစည်းပလက်ဖောင်းကို အသုံးပြု. စတင်ရန်လွယ်ကူစေသည်။
သင့်ရဲ့ကုန်သည်အကောင့်သင်တို့ကိုလည်းသင်နှစ်သက်တဲ့ပုံစံလွယ်ကူသောသုံးပြီးကုန်သွယ်စေ tools များနှင့်အင်္ဂါရပ်အမျိုးမျိုးမှ access ကိုပေးသည်။ အဲဒီကိရိယာအများအပြားပွဲစားများကကမ်းလှမ်းကြသည်မဟုတ်အရှိဆုံးအရာ၏ဇယားများနှင့်အညွှန်းကိန်းများပါဝင်သည်။
2013 ၎င်းတို့၏ပစ်လွှတ်ကတည်းက IQ Option အမြန်ဆုံးကြီးထွားလာအွန်လိုင်း binary options များပွဲစားများတစ်ဦးဖြစ်လာသည်။ tradable ပိုင်ဆိုင်မှုများကို၎င်းတို့၏ကြီးမားရွေးချယ်မှု, သင်ယူခြင်းအရင်းအမြစ်များနှင့်ကုန်သည်ဖော်ရွေ features တွေသူတို့ရဲ့ကြီးထွားဒီတော့အစာရှောင်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းအနည်းငယ်ရှိပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးကိုပြု၏တဲ့အခါမှာ IQ Option ပြန်လည်သုံးသပ်, အထူးသဖြင့်ဝါယာကြိုးလွှဲပြောင်းမှတဆင့်ရှည်လျားဆုတ်ခွာအပြောင်းအလဲနဲ့ကြိမ်အဓိကပြဿနာဖြစ်ကြသည်။ ဤသည်ကုန်သည်များသည်ယခုအခါပိုမိုမြန်ဆန်သူတို့ရဲ့ပိုက်ဆံရဖို့ရှိရာချက်ချင်းထုတ်ယူမိတ်ဆက်နေဖြင့်ကိုင်တွယ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါပွဲစားလည်းအသစ်သောဘဏ္ဍာရေးတူရိယာ (ဒီဂျစ်တယ်နှင့် Forex ရွေးချယ်စရာ) မိတ်ဆက်အားထုတ်မှုဖန်ဆင်းတော်မူပြီ, တတ်နိုင်သမျှသင့်ရဲ့ကုန်သွယ်အတွေ့အကြုံကိုအဖြစ်ချောမွေ့စေရန်ပိုမိုညွှန်းကိန်းများနှင့်အခြားစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် features တွေသြဇာတိုးတက်လာခဲ့သည်။
အခုပွဲစားကိုကျော်တစ်လလျှင် $ 380 သန်းနှင့်တစ်လလျှင် $ 10.8 သန်းပျမ်းမျှကုန်သည်ထုတ်ယူ၏ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာကြီးကြပ်အဖြစ်ဤအအားထုတ်မှုအချည်းနှီးဖြစ်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်။ အဘယ်အရာကိုဒီကဤသို့ဤပလက်ဖောင်းတွင်ကုန်သည်တစ်ဦးတရားဝင်အရေအတွက်ကိုရှိပါတယ်ဖြစ်ပါသည်။
ယေဘုယျအားသင်တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်အပြည့်အဝစညျးမဉျြးစညျးကမျးပွဲစားရှာနေတဲ့အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံရှိဘဏ္ဍာရေးတူရိယာကုန်သည်နေလျှင်, IQ Option ထည့်သွင်းစဉ်းစားရကျိုးနပ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ CySEC နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။ (ဆိုက်ပရပ်စ် Securities and Exchange Commission) ဥရောပ၌တည်၏။ 247 / 14 နှင့်လည်းဓနသဟာယ Authorized (Authorized ငွေပေးချေမှုရမည့် Institution မှ) ဖြစ်ပါသည်: အလိုင်စင်နံပါတ်
IQ Option ဥရောပ, သူတို့ရဲ့ဌာနချုပ် Yiannis Nicolaides စီးပွားရေး Center မှာဆိုက်ပရပ်စ်, Agiou Athanasiou ရိပ်သာလမ်း 33, 4102, Agios Athanasios, Limassol အတွက်အခြေခံသည်။
ဒီမိုများနှင့်အမှန်တကယ်ပိုက်ဆံအကောင့်နှစ်ခုလုံးကို, သင် 1 ကုန်သွယ်ရေးအပေါ်လုပ်နိုင်အခွခေံမူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခု $ 20.000 ဖြစ်လိမ့်မည်။
အပြင်အားလုံးစည်းမျဉ်းလိုအပ်ချက်များကိုအားဖြင့်လိုက်နာမှ, IQ Option ထိုနည်းတူသူတို့၏ client များ '' ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသေးစိတျ၏ဘေးကင်းလုံခြုံရေး secure ဖို့ခိုင်မာတဲ့ခြေလှမ်းများကြာပါသည်။ အဆိုပါကုန်သည်ရဲ့ကွန်ပျူတာစနစ်ကအကြားအားလုံးကို web traffic နှင့် IQ Option'' s ကိုဆာဗာများကိုသင့်အကောင့်မှမဆိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအမြတ်ရရှိမှုရှောင်ရှားရန်အတွက် SSL နည်းပညာကိုအသုံးချဖို့ encrypted နေကြသည်။
နံပါတျ IQ option သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းပလက်ဖောင်းရှိပြီးအဆိုပါ Meta Trader ပလက်ဖောင်းနဲ့ချိတ်ဆက်မထားပါ။
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ, ငါသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် "Skrill ပိုက်ဆံအိတ်" နဲ့တစ်ကယ့်ကိုအကောင်းအတွေ့အကြုံရှိသည် IQ option သငျသညျသိုက်သို့မဟုတ်ရုပ်သိမ်းဘို့မဆိုအပိုဝန်ဆောင်ခကောက်ခံကြပါဘူး။ လည်းတက်လက်မှတ်ထိုးခြင်းနှင့်ပိုက်ဆံလွှဲပြောင်းအစာရှောင်ခြင်းနှင့်လုံးဝနာကျင်မှု့မရှိတဲ့တတ်၏။ နှိမ့်ချ "Skrill ပိုက်ဆံအိတ်" ကိုအောက်က link ကိုနှိပ်ပြီးကိုယ့်ကိုကိုယ်ကထုတ်စစ်ဆေး;)
Skrill ပိုက်ဆံအိတ်, ငါ၏အတှေ့အကွုံအတွက်ကြောင့်သွားကြဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ် IQ option သငျသညျသိုက်သို့မဟုတ်ရုပ်သိမ်းဘို့မဆိုအပိုဝန်ဆောင်ခကောက်ခံကြပါဘူး။ ဒါ့အပြင်ဆုတ်ခွာမဆိုငွေပမာဏအတွက်ဖြစ်နိုင်ပြီးအလွန်အစာရှောင်တတ်၏။ ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်နာရီ 12 မှ 24 အတွင်းအားလုံးခဲ့ကြသည်ကိုဖန်ဆင်းနောက်ဆုံးမြင်ကွင်းကိုရုပ်သိမ်းပေးရန်။ (အလုပ်လုပ်ကိုင်ရက်ပေါင်းတွင်)
ဟုတ်ပါတယ်။ အဆိုပါပွဲစားနှစ်ပေါင်းများစွာကောင်းတစ်ဦးဂုဏ်သတင်းတက် built နှင့်ဥပဒေထိန်းသိမ်းရေး status ကိုရှိပါတယ်, အပေါငျးတို့သဖွငျ့အဲဒီမှာလာခဲ့ပါသည်
သူတို့အနိုင်ရပါပြီဆု။ ဒါ့အပြင် IQ Option လတိုင်းလုပ်ထုတ်ယူ၏နံပါတ်ကနေတရားစီရငျကြီးထွားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ 2015 များတွင်ကုန်သည်များတစ်လလျှင် $ 1.5 သန်းပျမ်းမျှနုတ်ထွက်သွားကြသည်။ ဤသည် 10.8 အတွက်တစ်လလျှင်ကျော် $ 2017 သန်းအထိခုန်တက်။
ဒါ့အပြင်သူတို့ 2017 ထံမှ 2018 မှ Aston Martin ပြိုင်ပွဲ၏တရားဝင်မိတ်ဖက်ခဲ့ကြပြီ။ IQ Option အမှန်အွန်လိုင်းကုန်သွယ်ကမ္ဘာကြီးယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သရုပ်ပြခဲ့သည်။
ရာစုနိုင်ငံတကာအရည်အသွေးရွှေခေတ်ဆုချီးမြှင့် သူများဖြစ်သောစီးပွားရေး Initiative မှဦးတည်အုပ်စု
အကောင်းဆုံးနည်းပညာလျှောက်လွှာ အဆိုပါ Web ကိုစျေးကွက်အစည်းအရုံးသူများဖြစ်သော
အကောင်းဆုံး Binary Options ကိုပွဲစားဥရောပ 2015 သူများဖြစ်သောဂလိုဘယ်ဘဏ်လုပ်ငန်း & ဘဏ္ဍာရေးဆန်းစစ်ခြင်း
အများစုမှာဆန်းသစ်သော Binary Options ကိုပလက်ဖောင်း သူများဖြစ်သော IFM ဆုပေးပွဲ 2015
အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းထရေးဒင်းပလက်ဖောင်း သူများဖြစ်သော IFM ဆုပေးပွဲ 2015
အလျင်မြန်ဆုံးကြီးထွားလာ Binary Options ကိုအမှတ်တံဆိပ် သူများဖြစ်သောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမှတ်တံဆိပ်မဂ္ဂဇင်း
အကောင်းဆုံးထရေးဒင်းပလက်ဖောင်း သူများဖြစ်သော Forex ဆုပေးပွဲ 2014
ကမ္ဘာ့ဦးဆောင် Binary Options ကိုပွဲစား သူများဖြစ်သော MasterForex-V ကို
အများစုကယုံကြည်စိတ်ချရသော Binary Options ကိုပွဲစား သူများဖြစ်သော MasterForex-V ကို
အများစုမှာဆန်းသစ်သော Binary Options ကိုပွဲစား သူများဖြစ်သောပြရန် FX ကမ္ဘာ့ဖလား
အကောင်းဆုံး Binary Options ကိုပွဲစား သူများဖြစ်သော FX အစီရင်ခံစာဆုပေးပွဲ
အကောင်းဆုံး Binary Options ကိုပွဲစားထရေးဒင်းလျှောက်လွှာ သူများဖြစ်သော IAIR ဆုပေးပွဲ
အကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ဖို့တာဝန်ခံအခမဲ့နှင့်အီးမေးလ် Facebook ကသို့မဟုတ် Google+ ဖွငျ့လုပျဆောငျဖို့လွယ်ကူပါတယ်။
နိမိတ်လက္ခဏာကိုတက်ပြီးနောက်သင် $ 10.000 သရုပ်ပြမုဒ်အကောင့်ကိုသုံးနိုင်သည်။
တကယ့်ပိုက်ဆံကူးပြောင်းသင်သည် $ 10 အမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်နိမ့်ဆုံးသိုက်စေရန်လိုအပ်ပါတယ်အကောင့်။
သင်ရုပ်သိမ်းရေးဖြစ်နိုင်ခြေစေရန်ဤလိုအပ်ပါတယ်ကြောင့်အမှန်တကယ်ပိုက်ဆံမှ switching ပြီးနောက်အဖြစ်ကောင်းစွာသင့်ရဲ့အထောက်အထားကိုအတည်ပြုရန်ရန်အကြံပြုသည်အကောင့်ဖြစ်ပါသည်။
ကံမကောင်းစွာသင်မသုံးလို့ရပါတယ် IQ Option USA တွင်ပလက်ဖောင်း။ ဒီအကြောင်းပြချက်သူတို့သက်ဆိုင်ရာအမေရိကန်အခြေစိုက်အာဏာပိုင်များကစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်မပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ကနဦးသိုက်အောင်သောအခါအသင်သာသင့်အကောင့်ငွေကြေးပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, သင်တို့၏သရုပ်ပြအကောင့်ပေါ်ရှိ "အပ်ငွေ" ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ထို့နောက်ပုံပေါ်သောသိုက်ပြတင်းပေါက်ပေါ်သင်နှစ်သက်တဲ့ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုရွေးချယ်ပါ။
ယင်းနောက်ပမာဏကိုရိုက်ထည့်ပါ။ ရုံ '' ပမာဏ '' တောအလက်ဝဲငှါ, '' ငွေကြေး '' လယ်ပြင်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါနှင့်သင့်ကုန်သွယ်အကောင့်ထဲမှာဖွစျလိမျ့မညျငွေကြေးရွေးချယ်ပါ။
အတူဖုန်းခေါ်အဆိုအရ IQ Option: "VIP-အကောင့်ကိုသူတို့မရှိတော့ကြောင်းကိုခေါ်နေနှင့်၎င်းတို့၏အကျိုးခံစားခွင့်အချို့အခြေအနေများနှင့်တွေ့ဆုံရန်အဘယ်သူသည်ကုန်သည်တစ်ဦးအလွန်ကန့်သတ်အရေအတွက်သာရရှိနိုင်ပါသည် '' ။
အမှန်တကယ်ဖွင့်လှစ် IQ Option အကောင့်အတော်လေးရိုးရှင်းပါသည်။ ရိုးရှင်းစွာအ၎င်းတို့၏အဓိကက်ဘ်ဆိုက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု iqoption.com ကာသရုပ်ပြအကောင့်ဖွင့်လှစ်။ ထို့နောက်သင့်ရဲ့မျက်နှာပြင်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းညာဖက်မှာ '' အပ်ငွေ 'ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ဒါဟာသင်သိုက်ဖို့ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းနှင့်ငွေပမာဏကိုရှေးခယျြပါလိမ့်မယ်ရှိရာသိုက်ပြတင်းပေါက်ရန်သင့်အားယူပါလိမ့်မယ်။ သင်သည်သင်၏သိုက်ကိုဖန်ဆင်းပါတယ်ပြီးတာနဲ့, ကသင့်ရဲ့အကောင့်ကိုဖွင့်ပြပါရန်သင့်သိုက်များအတွက်နာရီစက္ကန့်အနည်းငယ်မှတစုံတခုကိုယူပါလိမ့်မယ်။ ယခုတွင်သင်သည်အမှန်တကယ်ငွေနှင့်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်စတင်နိုင်ပါသည်။
မှတ်စု: ကျနော်တို့သင်သည်သင်၏ကနဦးသိုက်အောင်သင်ချက်ချင်းသင့်အကောင့်ကိုအတည်ပြုရန်အကြံပြုပါသည်။ ဤသည်ကပိုမိုလွယ်ကူအကြာတွင်ပေါ်တွင်သင်၏ဝင်ငွေရရှိမှုဆုတ်ခွာဖို့ဖြစ်စေမည်။
ဤသည်ပွဲစား CySEC စညျးမဉျြးစညျးကမျးဖြစ်ပြီးအများဆုံးဥရောပနိုင်ငံများရှိနိုင်ငံသားများ၎င်းတို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုပူဇော်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကအစအများအားဖြင့်အာရှ, လက်တင်အမေရိက, အာဖရိက, အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်နယူးဇီလန်အတွက် Non-စညျးမဉျြးစညျးကမျးနိုင်ငံများတွင်ခွင့်ပြုထားပါသည်။ ဒါဟာတချို့ဘဏ္ဍာရေးတူရိယာတိကျသောဒေသများအတွက်ကုန်သည်များမှသာရရှိနိုင်သည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်သို့သော်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။
နှစ်ခုအဓိကအကြောင်းရင်းများဘာဖြစ်လို့ရှိပါတယ် IQ Option သငျသညျသှေဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့ရှေးခယျြသောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုပလက်ဖောင်းကမထောက်ပံ့ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကုစားဖို့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းတစ်ဦးကိုထောက်ပံ့ပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုရွေးချယ်ရာတွင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယအကြောင်းပြချက်သငျသညျဥပမာ USA ကဲ့သို့ non-ထောက်ခံတိုင်းပြည်ကနေအကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့နောက်ထပ်အကူအညီအတွက်ဖောက်သည်ထောက်ပံ့ဆက်သွယ်အကြံပြုပါသည်။
IQ Option CFDs သငျသညျတိကျသောပိုင်ဆိုင်မှု (ညွှန်းကိန်း, cryptocurrencies နှင့်စတော့ရှယ်ယာ) ၏စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများအပေါ်အခြေခံပြီးသုံးသပ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်နှင့်ကုန်သွယ်မှုမှခွင့်ပြုပါ။ ထို့ကြောင့်သင်ကရိုးရိုးအခြေခံပိုင်ဆိုင်မှုရဲ့စျေးနှုန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်တိကျတဲ့အချိန်အပိုင်းအခြားကျော်ဆင်းတက်သွားပါလိမ့်မယ်ရှိမရှိခန့်မှန်းပါတယ်။ သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဟာလက်ရှိနှင့်အနာဂတ်စျေးနှုန်းများအကြားကွာခြားချက်အပေါ်အမြတ်ထုတ်ရန်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမရှိတယ်
သင်တို့ကဲ့သို့ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောပြန်လာ binary options များထဲတွင်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
ယင်းအပေါ်ကုန်သွယ် Forex မှ IQ Option ပလက်ဖောင်းကိုသင်ပထမဦးဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုစာရင်းတို့တွင် '' Forex '' option ကိုရွေးချယ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
လာမယ့်။ သင်၌ရောင်းဝယ်ဖောက်ချင်သောငွေကြေးကို pair တစုံကိုရွေးချယ်ပါ, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ပမာဏအဖြစ်မြှောက်ကိန်း (optional) ကိုရွေးချယ်ပါ။
ထို့နောက်သင့်ရဲ့ကုန်သွယ်ကန့်သတ် (အရှုံးကိုရပ်တန့်ခြင်းနှင့်အမြတ်အစွန်းယူ) သက်ဆိုင်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားသငျသညျဆုံးရှုံးမှုကန့်သတ်ခြင်းနှင့်သင်တို့ကိုလည်းဆန့်ကျင် reverse ကိစ္စတွင်စျေးကွက်အမြတ်အစွန်းအတွက်သော့ခတ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ Next ကို, သင် FX pair တစုံရဲ့စျေးနှုန်းအနေအထားရိုက်ထည့်မှရွှေ့မည်ထင်ညွှန်ကြားမှုကိုရွေးပါ။
ယင်းအပေါ် Bitcoin ဝယ်ရောင်းဖို့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်း IQ Option ပလက်ဖောင်း cryptocurrency CFDs အားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ ဒီနေရာမှာသင်အမှန်တကယ် BTC တိုကင်ပိုင်ဆိုင်မည်မဟုတ်။ အဲဒီအစား, သင်တိုကင်နံပါတ်ရဲ့စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများအပေါ်ခန့်မှန်းပြောဆိုချက်များအားဖြင့်အမြတ်အစွန်းပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့အမြတ်အစွန်းကုန်သွယ်မှုထွက်ပေါက်မှာကုန်သွယ်မှု entry ကိုများနှင့်စျေးနှုန်းမှာစျေးနှုန်းကွာခြားချက်ရတဲ့ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့လိမ့်မည်။ စတင်ရန်, ဤအဆင့်များအတိုင်းဆောင်ရွက်:
အဆိုပါ cryptocurrencies စာရင်းထဲက Bitcoin ကို Select လုပ်ပါ သငျသညျရင်းနှီးမြှုပ်နှံချင်သောကုန်သွယ်ငွေပမာဏကိုရိုက်ထည့်ပါ ကုန်သွယ်ကန့်သတ် Enter (အရှုံးကိုရပ်တန့်ခြင်းနှင့်အမြတ်အစွန်းယူ) သငျသညျ Bitcoin ၏စျေးနှုန်းအားယူပါလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ထားညှနျကွားခပေါ် မူတည်. '' မဝယ် 'သို့မဟုတ်' 'ရောင်း' 'ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ
IQ Option ဒစ်ဂျစ်တယ်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုအတော်လေးသစ်ကိုတူရိယာဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာသင် binary options များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုမြင့်မားအမြတ်အစွန်းစေရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
ဘယ်လိုလဲ? သငျသညျရိုးရှင်းစွာသပိတ်မှောက်စျေးနှုန်း (သင်ပိုင်ဆိုင်မှုရောက်ရှိဖို့မျှော်လင့်သောအရာကိုစျေးနှုန်း) နှင့်အချိန်အပိုင်းအခြား (သင်ပါလိမ့်မယ်အရာကျော်အဟောင်းအနေအထား) ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
ဤအမှုကိုပြုသောဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့ပလက်ဖောင်းကိုအလိုအလျောက်သင့်ရဲ့မျှော်မှန်းအမြတ်အစွန်းတွက်ချက်။ သင်တို့သည်လည်းအမြတ်အစွန်းအတွက်သော့ခတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှု minimize လုပ်ဖို့သက်တမ်းကုန်ဆုံးရှေ့တော်၌ကုန်သွယ်မှုကို exit နိုင်ပါတယ်။
IQ Option ထိုကဲ့သို့သော Neteller, Skrill နှင့် WebMoney အဖြစ်အများအပြား eWallets လက်ခံခဲ့သည်။ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ, ငါသည်ကြောင့်သုညတရားစွဲဆိုအခကြေးငွေနှင့်အစာရှောင်ခြင်းအပြောင်းအလဲနဲ့ကြိမ်မှ Skrill အကြံပြုချင်ပါတယ်။
အဆိုပါ IQ Option ပွဲစား app ကို အထူးသင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းဒါမှမဟုတ် desktop ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သော software ကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဒါဟာပိုမိုလွယ်ကူသည်သင်၏ကုန်သွယ်အကောင့်ကို logging စေသည်ပိုမြန်ပင်ပိုမိုလုံခြုံ။ ဒီ app ကို Android, MacOS, Window နဲ့ iOS devices တွေကိုများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်။
အဆိုပါ IQ Option မြှောက်ကိန်းသင် "ချေး" ငွေနှင့်ကုန်သွယ်မှုခွင့်ပြုသည့်အထူး feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျ $ 100 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ကုန်သွယ်မှုဝင်နေလျှင်ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုယခု $ 50 ဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကတစ် X5000 မြှောက်ကိန်းလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
သင့်ရဲ့ကုန်သွယ်မှုအောင်မြင်သော အကယ်. သင်ရိုးရှင်းစွာ $ 50 နှင့်ကုန်သွယ်မယ်ဆိုရင်ထက် 100 ဆပိုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာရိုးရှင်းစွာ platform ပေါ်တွင်မရရှိနိုင် cryptocurrencies အတိုကောက်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ Cryptocurrencies blockchain နည်းပညာကပံ့ပိုးရဲ့ကို virtual ငွေကြေးကိုတစ်ပုံစံရှိပါတယ်။
၏နှောင်းပိုင်းကသူတို့ကမ္ဘာလုံးအနှံ့ကုန်သည်များအကြားလူကြိုက်အများဆုံးဘဏ္ဍာရေးတူရိယာတဦးဖြစ်လာပါတယ်။ IQ Option လက်ရှိတွင် 11 ကွဲပြားခြားနားသော cryptocurrencies ပေးထားပါတယ်။
CFDs ရှုပ်ထွေးတူရိယာဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကြောင့်သြဇာမှလျှင်မြန်စွာပိုက်ဆံဆုံးရှုံးမြင့်မားသောစွန့်စားမှုနှင့်အတူလာ။ CFDs အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့်အခါလက်လီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ 74-89% အကြား, ငွေကိုဆုံးရှုံးအကောင့်။ သင် CFDs အလုပ်လုပ်ပုံကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းရှိမရှိစဉ်းစားပါနဲ့သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံဆုံးရှုံး၏မြင့်အန္တရာယ်ယူတတ်နိုင်ခြင်းရှိမရှိသင့်တယ်
Tags: Iq Option, Iq Option api, Iq Option App ကို, Iq Option App ကိုဒေါင်းလုပ်, Iq Option App ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, Iq Option demo, Iq Option ဒေါင်းလုပ်, Iq Option သက်တမ်းကုန်ဆုံးအချိန်, Iq Option iOS, Iq Option ကို Safe ဖြစ်ပါတယ်, Iq Option အစ္စလာမ့်အကောင့်ကို, Iq Option အွန်လိုင်းထရေးဒင်း, Iq Option မှတ်ပုံတင်ခြင်း, Iq Option ဆန်းစစ်ခြင်း, Iq Option ကစားပွိုငျပှဲ, Iq Option ထရေးဒင်း, Iq Option အဆုံးစွန်ထရေးဒင်းအတွေ့အကြုံ, Iq Option ဆုတ်ခွာပြဿနာများ
ဧဇရ Jace - ဇူလိုင်လ 26, 2017 @ 06: 08
အစဉ်မပြတ်ငါတာဘိုကုန်သွယ်လုပ်ပါ။ ဒါဟာတကယ်တစ်ဦးကငွေဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ကိုယ့်ကဒီပွဲစားသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးသောနေ့၌ငါပိုက်ဆံဆုတ်ခွာ၏ပြဿနာတစ်ခုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်ထောက်ခံမှုပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ သူတို့ကပဲခဏအတွင်းကဖြေရှင်း။ အရမ်းကျေနပ်မိပါတယ်။
မိုက်ကယ်အီဗန် - စက်တင်ဘာလ 16, 2017 @ 14: 19
ငါ site ကိုရှင်းလင်းစွာကုန်သည်များကရြောစေခြင်းငှါအန္တရာယ်အကြောင်းကိုသတိပေးထားဆိုတဲ့အချက်ကိုကိုချစ်။ သို့သော်ဒီဒွိ thingy ၌ငါ့နောက်ကျောတယ်တော်မူကြောင်းကိုတဦးတည်းကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မစတင်သောအခါငါ $ 10 သူတို့ရဲ့နိမ့်ဆုံးသိုက်၏အားသာချက်ကို ယူ. , ကချွတ်ပေးဆောင်။ ငါကအားလုံး rosy ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုမပြောနိုင်ပေမယ့်အကျိုးအမြတ်ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါ site ကိုရှင်းလင်းစွာကုန်သည်များကရြောစေခြင်းငှါအန္တရာယ်အကြောင်းကိုသတိပေးထားဆိုတဲ့အချက်ကိုကိုချစ်။ သို့သော်ဒီဒွိ thingy ၌ငါ့နောက်ကျောတယ်တော်မူကြောင်းကိုတဦးတည်းကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မစတင်သောအခါငါ $ 10 သူတို့ရဲ့နိမ့်ဆုံးသိုက်၏အားသာချက်ကို ယူ. , ကချွတ်ပေးဆောင်။ အိုင်စီ
Lizzie ဘရောင်း - အောက်တိုဘာလ 13, 2017 @ 16: 06
IQ Options ကိုအစဉ်အမြဲငါနှင့်အတူကုန်သွယ်င့်ကိုအကောင်းဆုံးပွဲစားတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ဘာလို့ထင်လဲ? ကျွန်မကြုံတွေ့အဆိုပါသရုပ်ပြအကောင့်ငါ့ကိုဒီပွဲစားထွက်ကြိုးစားရန်တိုင်းအကြောင်းပြချက် ပေး. , အဲဒါကိုတန်ဖိုးရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါ့အငွေသားဆုတ်ခွာတစ်လုပ်ရတဲ့-အခမဲ့တဦးတည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသည်ဤပွဲစားအကြံပြုပါသည်။
Floyd089 - ဒီဇင်ဘာလ 24, 2017 @ 11: 25
ကျွန်မနှင့်အတူ Bitcoin နှင့်အခြား cryptocurrencies ကုန်သွယ်မှု IQ option
Duke - ဇန်နဝါရီလ 21, 2018 @ 19: 25
အလွန်ပျော်ရွှင် IQ Option၎င်းတို့၏ပေးချေမှုအဖြစ်ကောင်းစွာကျွမ်းကျင်မှုရန်အလွန်လျင်မြန်ဖြစ်ပါသည်
Walkerog - မေလ 29, 2018 @ 13: 10
ပှဲစား IQ Option, မူအရ, ကျေနပ်။ ပလက်ဖောင်းအတွက်အသေးစားအားနည်းချက်တွေကိုနေသော်လည်းအဲဒါကိုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အဆင်ပြေပါတယ်။ ငါခြင်းကိုကျေနပ်ခဲ့ပါတယ်။
နိမိတ်လက္ခဏာကိုဂျေ Petersen - ဇွန်လ 5, 2018 @ 04: 52
အဆိုပါ IQ option ပလက်ဖောင်းအမှန်တကယ်ကုန်သည်များနှင့်အတူလက်-In-လက်အလုပ်လုပ် In-အိမ်သူအိမ်သားပရိုဂရမ်မာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကတီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောသည်အတိုင်း, IQ option ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းတစ်ဦးအလွန် exigent ကုန်သည်နှင့်ပိုပြီးအပေါငျးတို့သလိုအပ်ချက်များကိုဖုံးလွှမ်း။ သင်သည်အဘယ်သို့အများဆုံးမကြာခဏအကြောင်းကိုနားထောင်မည် IQ option သူတို့ client များအတွက်ထိပ်တန်းကုန်သွယ်ရေးကိရိယာများပေးကြောင်း, သို့သော်တောင်တပြင်လုံးကိုပုံပြင်ပြောပြရန်စတင်မထားဘူး။ လအနည်းငယ်အကြာ,
အဆိုပါ IQ option ပလက်ဖောင်းအမှန်တကယ်ကုန်သည်များနှင့်အတူလက်-In-လက်အလုပ်လုပ် In-အိမ်သူအိမ်သားပရိုဂရမ်မာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကတီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောသည်အတိုင်း, IQ option ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းတစ်ဦးအလွန် exigent ကုန်သည်နှင့်ပိုပြီးအပေါငျးတို့သလိုအပ်ချက်များကိုဖုံးလွှမ်း။ သင်သည်အဘယ်သို့အများဆုံးမကြာခဏနားထောင်မည်
karen - ဇွန်လ 20, 2019 @ 00: 56
ငါ၏ Umarket.com အွန်လိုင်းအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီတခုယုံကြည်စိတ်ချခံရဖို့ဟုဆိုကာခံခဲ့ရသည်တစ်ဦးလိမ်လည်လှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီ၏သားကောင်ဖြစ်ရပြီ။ သူတို့နှင့်အတူ 50,000EUR ငါ့အကောငျ့ကိုကျော်ဘို့ငါ့ကို defrauding ပြီးနောက်ငါသည်ငါ၏ရန်ပုံငွေများဆုတ်ခွာဖို့မေတ္တာရပ်ခံကတည်းကသူတို့အကောင့်အပေါ်မှာငါ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမြို့တော်ဆုတ်ခွာဖို့ငါ့ကို access ကိုပေးသနားတော်မူသည်မဟုတ်, ပိတ်ဆို့ခံခဲ့ရခြင်းနှင့်ကိုယ့်ဟာသူတို့ရဲ့ site ပေါ်တွင်မိမိ၏အကောင့်မှဝင်ရောက်ခွင့်အဘယ်သူမျှမဖူး ငါ့အရန်ပုံငွေများကိုပြန်လည်ရယူရန်မရှိနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ကံကောင်းတာကကျွန်မမစ္စတာဂယ်ရီ Ashton က၏လူတစ်ဦးအတွက်တစ်ဦးရန်ပုံငွေများပြန်လည်နာလန်ထူကျွမ်းကျင်သူအကြံပြုသော Trustpilot website တွင်မှတ်ချက်ဖြတ်ပြီး လာ. , ကိုယ်ကသူ့အီးမေးလိပ်စာမှတဆင့်ချက်ချင်းသူ့ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခြင်းနှင့်သူ့ကိုငါ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပွဲစားနဲ့ငါ့ကိစ္စများကရှင်းပြသည်ဘုရားသခငျသညျဒါမျိုးကိုသူဖြစ်ခဲ့သည် ငါသည်ငါ့ကုန်သွယ်အတွေ့အကြုံကိုတစ်ဦးအကြောင်းကိုပေးအပ်သတင်းအချက်အလက်များနှင့်အတူလိမ်လည်မှုပွဲစားတစ်ဦးအမှုတညျဆောကျနိုငျခဲ့ ...
ငါ၏ Umarket.com အွန်လိုင်းအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီတခုယုံကြည်စိတ်ချခံရဖို့ဟုဆိုကာခံခဲ့ရသည်တစ်ဦးလိမ်လည်လှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီ၏သားကောင်ဖြစ်ရပြီ။ သူတို့နှင့်အတူ 50,000EUR ကျော်ငါ့အကောငျ့အတှကျအကြှနျုပျကို defrauding ပြီးနောက်ငါသည်ငါ၏ရန်ပုံငွေများဆုတ်ခွာဖို့မေတ္တာရပ်ခံကတည်းကသူတို့မ, ပိတ်ဆို့ခဲ့သည်
ဘင် Mee - ဇွန်လ 25, 2019 @ 10: 04
Chantal - ဇွန်လ 28, 2019 @ 17: 37
je m'appelle Chantal, j'habite တစ် Brest en ပြင်သစ်။ J'ai étéarnaqué d'Une somme က de 23.000 ယူရို et j'ai Contact plusieurs organisme က de sécurité en ပြင်သစ် comm la ရဲတပ်ဖွဲ့, la Gendarmerie et meme la ရဲတပ်ဖွဲ့ Interpol en ပြင်သစ် mais aucun အားထုတ်မှု n'a été fait က de leurs Cote, donc Une qui တစ်ဦးအေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့သြétéသားကောင်က de ce အမျိုးအစားများ amie d'escroquerie après avoir lui expliqué ma ခွအေနကေို elle m'a conseillé et m'a donné l'adresse E-mail ကို d'un Inspecteur က de ရဲတပ်ဖွဲ့ d'un, ce qui m'arrive လောင်း organisme ဆိုက်ဘာ Anti-Criminalitéအဆက်အသွယ် inspecteur က de ရဲတပ်ဖွဲ့ et Final je suis soulagée et tous CES ဆုမွန်ကောင်း Que j'avais perdu m'ont étéremboursés cet mettant en Contact avec, မွန်ပြဿနာ trouver က de ဖြေရှင်းချက်လောင်း Que j'ai fait en ငါ့ကိုရှေးခယျြခဲ့ ။ tous, vous qui avez étéသားကောင်များ d'arnaque en Cote d'Ivoire, au ဘီနင်ဖိတ်ခေါ် plusieurs ou de l'Afrique ချေ, veuillez prendre Contact avec et je vous cela, je vous donne l'E-mail ကိုက de cet inspecteur က de ရဲတပ်ဖွဲ့လောင်း cet inspecteur က de ရဲတပ်ဖွဲ့ qui m'a လက်ထောက်àrécupérer mes sous des က de ses band d'escrocs mains ။ သည် L'adresse E-mail ကိုက de cet inspecteur က de ရဲတပ်ဖွဲ့ qui m'a cette ရေးရာ est လောင်းလက်ထောက်: ကဲ့ရဲ့ (ARNAQUE)
ce inspecteur က de ရဲတပ်ဖွဲ့ est très bon dans ce ဒိုမိန်း: si vous avez étéarnaqué sur la ပင်ပန်း d'Une: Gross somme d'argent, d'achátမဟုတ်သောညီala ဓာတ်ပုံ virement bancaire က de, က de chantage sur le ပိုက်ကွန်ကို, က de faux maraboutage et faux, paypal, က de fausses histoire d'Amour soutirer de l'argent, က de အပေါက်တွေက de voiture..etc ... .. , si vous le အဆက်အသွယ်များ, il trouvera facility vos escroc et Une fois qu'ils seront arrêtés, vous လောင်း serez rembourser က de tous vos ဖွာ suivi des ဖွာက de dédommagement et moi နည်းလမ်းနမူနာတန်းတူ, j'ai étéremboursé d'Une somme က de 28.000 ယူရို au အစား d'Une somme က de 23.000 ယူရို
si vous avez été Une fois d'Une escroquerie, je vous conseille က de Contact cet inspecteur က de ရဲတပ်ဖွဲ့တန်းတူသား adresse မေးလ် qui est victimes:
je m'appelle Chantal, j'habite တစ် Brest en ပြင်သစ်။ J'ai étéarnaqué d'Une somme က de 23.000 ယူရို et j'ai Contact plusieurs organisme က de sécurité en ပြင်သစ် comm la ရဲတပ်ဖွဲ့, la Gendarmerie et ME
Created: ဇန်နဝါရီလ 20, 2019
က AUTHOR RATEUser rating (72)
က AUTHOR RATEUser rating (41)